Tababaraha Arsenal oo boorsada lacagta loo furay – SBC
Tababaraha Arsenal oo boorsada lacagta loo furay
Tababaraha kooxda Arsenal oo ka mid ah kooxaha ka dhisan wadanka Ingiriiska isla markaana kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Premiership-ka Arsene Wenger ayaa la xaqiijiyey in uu aqbalay maalgalin aan horey u soo marin oo lagu sameeyo ciyaartoyda kooxda koowaad ka dib markii kooxdu ay ku jirtey mudo 6 sano ah abaar dhanka Koobabka ah.
Warbixin dheer oo ay qortey jariidada Daily Mail ee ka soo baxda magaalada London islamarkaana ay sheegtey in ay ka soo xigatey dad ku dhaw Macalin Wenger ayey ku sheegtey in Arsenal faxasi doonto ciyaartoy caan ka ah kooxda xiligan kuwaasi oo lagu badali doono ciyaaryahano cusub.
Arsene Wenger oo in mudo ah diidanaa in uu kooxda isbadal xoogan oo soo ciyaartoy cusub soo gato ayaa hada la sheegay in uu aqblay in jeebka gacanta loo galiyo mulkiilayaasha kooxda isla markaana uu kala soo baxo malaayiin doolar oo uu ku soo gato xidigo cusub oo kooxda ka saara abaarta koobab la’aanta.
Ciyaartoyda Arsenal ee xagagan la fasaxi doono ayaa waxaa ka mid ah Emmanuel Eboue, Tomas Rosicky, Abou Diaby, Denilson iyo goolhaye Manuel Almunia.
Wenger oo mudo rumaystaa in team-ka da’yarta ah ee is ciyaar batey ay la imaan doonaan mustaqbal wanaagsan ayaa candhuufta dib u liqay oo dantu ku qasabtey in uu qaato talooyinka ah in uu soo iibsado ciyaartoy cusub waxaana la sheegay in taladaasi ay u cadaatey ka dib markii Arsenal mudo 15 cisho ah laga saarey 3 koob oo mid ka mid ah ay timid Final-ka kaasi oo ah Curling Cup-ka oo la rumaysnaa in uu noqon doono koobka bilowga u noqon doona koobab la’aanta Arsenal wehelka la aheyd mudada lixda sano ah.
War si hoose loogu soo dusiyey Sportsmail ayaa lagu sheegay in lagu qalqaaliyey Tababare Wenger in uu iska beeciyo tiro ka mid ah ciyaartoyda keydka fadhida isla markaana dhaqaalaha ka soo gala uu ku kabo dhaqaale malaayiin doolar ah oo uu ku soo gato laacibiin cusub.
Ciyaartoyda kale ee la filan karo inay ka degaan Tareenka Fly Emirates ee uu wadaha ka yahay macalin Wenger ayaa waxaa ka mid ah weeraryahanka Denmark u dhashay Nicolas Bendtner, xidiga Ruushka ka soo jeeda ee Andrey Arshavin, iyo difaaca dhanka dambe ee dhanka midig ee ka soo jeeda Faransiiska Gael Clichy .
Laacibiinta tooshka macalin Arsene Wenger hada ku ifsan yahay ee uu doono in uu u xiro maaliyada Arsenal ayaa waxaa ka mid ah xidiga kooxda Everton difaaca dambe dhanka bidix uga ciyaara Leighton Baines, kubad qaabeeyaha dhexda uga ciyaara kooxda Lille ee Faransiiska, 20 jirka u dhashay Beljimka wuxuu saftey 19 kulan waxaana la sheegay in dalka Beljim looga yaqaan Messi.
Sidoo kale Macalin Wenger wuxuu isha ku hayaa 19 jirka difaaca uga ciyaara kooxda Blackburn ee lagu magacaabo Phil Jones, weeraryahanka kooxda Southampton ka tirsan ee 17 jirka ah ee lagu magacaabo Alex Chamberlain kaasi oo ay isku haystaan Arenal & Man United.
Kulan uu la yeeshay Arsene Wenger gudiga taageerayaasha Arsenal ee loo yaqaan Trust wuxuu shaley u muujiyey taageerayaasha jidbaysan ee kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London inay kalsooni siiyaan dhalinyaradiisa isagoo sheegay in aanay lumin kalsoonida kooxda wuxuuna xusey in qaar ka mid ah kooxaha ay mudo 20 sano gudaheed ah wadeen is dhisid haatana ay ka dambeeyaan Arsenal kala horeynta kooxaha, wuxuu sidoo kale niyada ugu dhisay taageerayaasha Arsenal in ay kooxo 10 jeer lacagta Arsenal gashay ay ka baxdey kuwaasi oo hal ciyaartooy oo kaliya kala baxay lacagta ay ku fadhiyaan dhamaan team-ka Arsneal kooxdaasi oo uu sheegay in ay ka dambeyso Arsenal.
Wenger wuxuu kaloo niyada ugu qaboojiyey taageerayashiisa in ay ogaadaan in Arsenal & Man United ay yihiin labada kooxood oo Ingiriiska ka socda oo mudo 15 sano ah si joogto ah sanad kasta uga qayb galayey Champions League.